सन्तोष देउजालाई लाग्यो यस्तो आ,रोप, सन्तोषलाई यस्तो सम्म भन्ने महिला यसरि आ,क्रोश हुँदै आइन मिडियामा – हेरौ भिडियो « Etajakhabar
चर्चित युट्युबर सन्तोष देउजाले धेरैको घरबार मिलाएका छन् । बिग्रेका घरबारहरु मिलाउने क्रममा उनी भारत समेत पटक पटक पुगेका छन् । सन्तोषले लिने अन्तरवार्ता र समस्याको समा,धानले धेरै मानिसलाई राहात मिलेको छ । सन्तोष बेला बेला आलो,चित पनि भएका छन, एउटा सुत्केरी प्रकरण घटना मिलाउन भन्दै गएका युट्युवर सन्तोष देउजा मिडियाकर्मीका रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा एक प्रहरी र अनु,सन्धानकर्ताका रुपमा प्रस्तुत भएपछि सामाजिक सञ्जालमा निकै आलोचित भए ।
मनमायाका श्रीमान अमर सुनार केही समय देखि सम्पर्क विहिन भएका थिए तेसैले अमरलाई तँ भनेर सम्बोधन गरेर ठूलो श्वरले बोलेका थिए । सार्वजनिक मिडियामा तँ भनेर सम्बोधन गर्दै उनले देखाएको ब्यवहारको आलो,चना भएको थियो । स्पष्ठ वक्ता तथा कलाकार सबिता भट्टराईले उनलाई अर्को कुराको आरोप लगाइन । उनले के के भनिन त हेरौ भिडियो
कुलमानलाई कहिले दिँदैछ देउवा सरकारले नियुक्ति ? हितेन्द्रदेव शाक्यले सजिलै मान्छन त ? यसो भन्छ मन्त्रालय – भिडियो सहित